दादासाहेब फाल्के पुरस्कार थाप्दै जब अमिताभले यस्तो प्रश्न गरे… – Nepali Digital Newspaper
दादासाहेब फाल्के पुरस्कार थाप्दै जब अमिताभले यस्तो प्रश्न गरे…
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 8 months ago December 29, 2019
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले आज (२९ डिसेम्बर) भारतको राष्ट्रपति भवनमा आयोजित समारोहमा दादासाहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण गरे । यसै वर्ष गत सेप्टेम्बरमा उनलाई भारतीय फिल्म जगतको यो सबभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान गरिने घोषणा गरिएको थियो ।
खासमा गत साता आइतबार नै राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह आयोजना गरिएको थियो, तर उक्त समारोहमा उपस्थित भएर सम्मान थाप्न बच्चनलाई स्वास्थ्यले साथ दिएन । तसर्थ, महानायक अमिताभ बच्चनकै लागि आइतबार पुनः अलग्गै समारोह आयोजना गरिएको थियो, जसमा उपस्थित भई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको हातबाट उनले दादासाहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण गरे ।
आफूलाई सम्मान प्रदान गरेकोमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई धन्यवाद दिएपछि आफ्नो सम्बोधनमा उनले फिल्म उद्योग र भारतीय जनताका साथै आफ्ना तमाम दर्शकलाई पनि धन्यवाद दिए । तर, आफ्नै शैलीमा मुसुक्क मुस्काउँदै उनले एउटा प्रश्न तेर्स्याए– ‘मलाई यति उच्च पुरस्कारबाट सम्मानित गर्नुको तात्पर्य कतै यो त होइन कि म अब काम छोडेर घरै बसुँ ?’ सभाहलमा उपस्थित सबै गलल्ल हाँसे ।
उनले अगाडि भने– ‘भगवानको कृपा छ, मातापिताको आशीर्वाद ममाथि छ, फिल्म उद्योगका निर्माता–निर्देशक एवम् सहकर्मी कलाकारहरूको पनि साथ पाएको छु, र सबभन्दा महत्वपूर्ण त तमाम जनताको स्नेह र निष्ठापूर्ण प्रोत्साहन रहेको छ, जसले गर्दा यतिबेला म तपाईंहरूसमक्ष खडा छु ।’
‘दादा साहब फाल्के पुरस्कार आजभन्दा ५० वर्षपहिले स्थापना भएको थियो र संयोगवश मैले पनि फिल्म उद्योगमा त्यति नै वर्ष का मगर्ने सौभाग्य पाइसकेको छु । यसको लागि म आभारी छु । म यस पुरस्कारलाई अत्यन्त विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्दछु, फेरि पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र नमस्कार गर्दछु ।’
‘यस मञ्चबाट उत्रनुअघि थप केही भन्न चाहन्छु । जब यस पुरस्कारको घोषणा गरिएको थियो– मेरो मनमा सन्देह उठ्यो । धृष्टताको निम्ति क्षमा चाहन्छु र भन्छु कि कतै तिमीले धेरै काम गरिसक्यौ अब घरमै बस भन्न खोजेको त होइन ?! किनकि, महिला एवम् सज्जन वृन्द ! काम अझै बाँकी छ जसलाई मैले पूरा गर्नैपर्छ । अगाडि यस्तो सम्भावना प्रशस्तै देखिरहेको छु जहाँ मलाई काम गर्ने पर्याप्त मौका प्राप्त हुनेछ ।..’
अमिताभको यो अभिव्यक्तिप्रति सभामा उपस्थित सबैले मुस्कानसहित ताली दिएर समर्थन गरे । कार्यक्रमकी उद्घोषिकाले मुखै फोरेर भनिदिइन्– ‘भारतका दर्शकले तपाईंलाई आराम गर्न दिने छैनन् ।’
बलिउडमा अमिताभ बच्चन ‘मेगा स्टार’ र ‘बिग बी’को रूपमा पनि प्रख्यात छन् । उनको पहिलो फिल्म सन् १९६९ मा प्रदर्शन भएको ‘सात हिंदुस्तानी’ थियो भने सन् १९७३ मा रिलिज भएको प्रकाश मेहरा निर्देशित ‘जंजीर’मार्फत् अमिताभले ‘बक्स अफिस’मा सफलताको ढोका उघारे । त्यसपछिको दुई दशक हिन्दी फिल्ममा उनको लगभग एकछत्र राज चल्यो । यही अवधिमा उनलाई ‘सुपरस्टार’ र ‘महानायक’ जस्ता उपाधि मिल्यो ।
सफलताको यस चरणमा अमिताभ बच्चनले प्रकाश मेहराका अलावा मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा र ऋषिकेश मुखर्जी जस्ता फिल्म निर्माता/निर्देशकहरूसँग थुप्रै फिल्ममा काम गरे ।
ऋाफ्नो करिअरको दोस्रो चरणमा उनले नयाँ निर्देशकहरूसँग काम गरे । यस समयमा उनले ‘ब्ल्याक’ र ‘पा’ जस्ता प्रयोगधर्मी फिल्ममा अभिनय गरे । अमिताभ बच्चनले टिभी (सानो पर्दा)मा पनि सफलताको नयाँ इतिहास रचे । उनी सन् २००० देखि गेम शो ‘कौन बनेगा करोडपति’को होस्ट रहँदै आएका छन्, जो आम दर्शकमाझ अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम रहँदै आएको छ ।
अमिताभ बच्चनले भारतका चारवटा राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार र १५ पटक फिल्म फेयर पुरस्कारसहित धेरै पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसकेका छन् । सन् २०१५ मा उनलाई भारत सरकारले पद्म विभुषणबाट सम्मानित गरेको थियो । ७६ वर्षीय अभिताभ फिल्म तथा टिभी कार्यक्रमहरूमा अझै उत्तिकै सक्रिय रहेका छन्, जो सबैका लागि प्रेरणादायी कार्य हो ।